မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Visit to 360 Sky Point & Movie World - Gold Coast Day 2
ရှုခင်းတွေလည်းလှ လူလည်းလှ စာအရေးအသားလည်းကောင်းတာမလို့နောက်တပိုစ့်မျှော်နေပါတယ် မဗေဒါရေ
3/13/2013 12:42 PM
အမြဲတမ်းအားပေးတဲ့ ပိုးပိုးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...
never feel bored whenever i read your post. waiting more posts
3/13/2013 6:25 PM
အစ်မရေ ဖတ်လို့ မ၀ဘူး ထပ်ရေးဦး ဟီး
oh oh... please be patient and wait... :D
3/13/2013 7:34 PM
ထမင်းစားလိုက်မှ အားရှိသွားတယ်လို့ ပြောတော့ ပြုံးလိုက်မိတယ်:) မဗေဒါရဲ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးကြည့်လို့ ကောင်းတယ် မဗေဒါရဲ့ စကားပြောခန်းတွေက သဘာဝကြတယ် ဟိုဘက်ခန်းကဘွားတော်နဲ့ စကားပြောခန်းတောင် ရအောင်ရိုက်ယူလိုက်နိုင်တယ် ကင်မရာကို
အဲဗားစတန်းဘိုင်လုပ်ထားပုံပဲ ဟော်တယ်ကလဲနေချင်စရာလေး နေလိုသိပ်မကောင်းတဲ့ကြားက လည်ခဲ့တဲ့နေရာ၊ စားခဲ့တဲ့ ကြုံခံတဲ့အရာတွေကို အသေးစိပ်မှတ်တမ်းလေးလုပ်ပြီး ပြန်ရှယ်ပေးတဲ့ မဗေဒါကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘက်ဂရောင်း သီချင်းလေးကလဲ ရွေးတတ်သေး ဒီလိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးလုပ်ဖို့ ဆို အိုက်ဒီယာကောင်းမှ :) နောက်ပိုစ့်တွေမျော်နေမယ်နော်
Oh you did not write the whole thing about Gold Coast! LOL
What do u mean? The whole thing? I wouldn't know the whole thing about Gold Coast since I am there only3days... I only write what I experienced and my thought only.
LOL... I know what u meant now... :P
အစ်မရေ ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး အစ်မရဲ့ ဘလော့ခ်ကို ၀င်မွှေနေတာ။ ခရီးသွားအတွေ့အကြုံတွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ အားပါးတရ အကုန်လုံး ဖတ်သွားပါတယ်နော်။
လာဖတ်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... လိုအပ်တာတွေလဲ ပြောပေးပါအုံး.... :)